Planet X Angano diso izy ireny - News Fitsipika
Planet X Angano diso izy ireny
Izany dia iray saro-takarina planeta fa ho 200 taona niseho tamin'i manazava Uranus'S wobbly mihodina. Ary nisy ny anabavy masoandro-pahaizana mba ho akaiky ny rafi-masoandro izay nahatonga asteroids mba ihemorana amin'ny tany.
Misy olana iray monja: tsy “Planet X” na “rafiny” mbola nisy, ny mpikaroka hanao hoe:.
Na azo inoana fa tsy.
“Ny rafi-masoandro ivelany mety tsy ahitana gazy be dia be planeta goavana (“Planet X”), na kely, mpiara-kintana (“rafiny”),” namarana University of Pennsylvania astronoma Kevin Luhman, izay nitarika ny fianarana mampiasa ny Wide NASA-tsaha Infrared Survey Explorer (HENDRY) teleskaopy.
Ny valiny dia nivoaka tao amin'ny fanontana vao haingana indrindra ny The Astrophysical Journal.
Ny ankamaroan'ny teoria efa Tombanana Planet X ho hatramin'ny efatra heny ny habeny Jopitera — ny lehibe indrindra tany amin'ny rafi-masoandro.
Soso-kevitra izy ireo fa mety ho hita ny sasany 1,486 arivo tapitrisa kilometatra (923 arivo tapitrisa kilaometatra) avy amin'ny masoandro, na ny 10,000 fotoana lavitra noho ny tany ny mihodina.
Fa ny sary voangona ny teleskaopy tsy mamantatra misy manohitra lehibe kokoa noho Jupiter.
Luhman tsy hanapaka ny mety fa ny planeta dia miafina any ho any ao amin'ny fehin asteroid.
A solosaina niteraka NASA Montage azo 29 Aogositra 2002 avy amin'ny sary nangonin'ny ny Voyager 2 sambon-danitra dia mampiseho Neptune (Lower-L) tahaka ny mety hiseho avy amin'ny sambon-danitra hanatona Triton, Lehibe indrindra Neptune volana
Mety ho sarotra ny mahita ireo akaiky raha mifanaraka amin'ny kintana mamirapiratra izay manajamba ny teleskaopy, na dia kely noho ny be efa-pahaizana.
Ary rehefa afaka izany fanadihadiana farany, Luhman hoy ny mifanohitra ny nahita ny iray no tena inoana: “Izany dia toy ny anankiray amin'ny zato vintana.”
Sary an-tsaina ny mpahay siansa voalohany ny fisian'ny Planet X in 1781, rehefa nahita Uranus, ny gazy goavam-be izay talanjona astronoma sy ny orbital fiovana, Toa tsy mifanaraka amin'ny Newton ny lalàn'ny hery misintona.
Mpanara-maso nanatsoaka hevitra fa ireo tsy fanarahan-dalàna azo hazavaina amin'ny alalan'ny ny fisian'ny hafa, tsy fantatra planeta izay mikely aina azy manokana ny hery misintona.
anglisy: Ity dia endriky ny planeta Uranus noraisin'ny ny sambon-danitra Voyager 2 amin'ny 1986 (sary: Wikipedia)
Ezaka ny manara-maso izany saro-pantarina Planet X nitarika ny nahitana ny Neptune in 1846. Fa ny tombanana faobe ny Neptune tsy afaka manazava ny deviations ny Uranus ny mihodina.
Dia Ilay nitondra manam-pahaizana mba hanohy ny fikarohana ho an'ny Planet X — izay, mifandimby, nitarika ny nahitana ny Pluto in 1930. Fa ny botry kely planeta kely loatra ihany koa ny manazava ny tsy ara-dalàna Uranus lalana manodidina ny masoandro.
Farany, ao amin'ny taona 1990, mpikaroka tapa-kevitra fa efa kely ampianarina hahalala ny faobe amin'ny Neptune, izay midika ny planeta raha ny marina mety ho antony orbital Uranus ny fitondran-tena.
Na izany aza Planet X mpino dia tsy mbola resy lahatra.
– Rahavavy masoandro namono dinosaurs? –
Ny fisian'ny rafiny, ny masoandro toy ny kintana tsy lavitra teo, voalohany posited ao amin'ny taona 1980. ny kintana, amin'ny alalan'ny indraindray tonga akaiky kokoa ny masoandro, nanakantsakana ny mihodina ny comets sy asteroids nitarika azy ireo indraindray namely ny tany.
Fifandonana toy izany no tsiny noho ny dimy bahoaka tamingana ny farany 540 tapitrisa taona — ny farany indrindra ho lany tamingana ny dinôzôro 65 tapitrisa taona lasa izay.
“Noho izany nandritra ny taona maro, nisy ireo tapa-porofo hafa manolo-kevitra dia mety ho zavatra ao,” Luhman nanazava ny AFP.
Fa ny hendry teleskaopy tsy nahita na inona na inona no.
Ny mihaza ny Planet X sy ny rafiny mety ho avadika foana, fa ny fianarana no mandry 3,525 kintana ary izay tsy mainty dwarfs — zavatra izay eny amin'ny lanitra faobe nametraka azy ireo eo amin'ny kintana sy ny planeta lehibe — ao anatin'ny 500 fahazavana taona ny masoandro.
“Mpifanolo-bodirindrina kintana rafitra izay efa miafina eo imasonao fotsiny tsotra hitsambikina avy ao amin'ny tahirin-kevitra HENDRY,” hoy Ned Wright, iray University of California, Los Angeles astronoma, izay nandray anjara tamin'ny fianarana.
26309	0 Gas goavana, NASA, rafiny, Neptune, Planeta mihoatra Neptune, Solar System, Uranus, Wide-saha Infrared Survey Explorer
← RIAA te Google mba manao zavatra bebe kokoa mba hiady 'piraty’ New fitaovana ho an'ny ady hosoka →